Itemplate yezicatshulwa zoyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nangona bekungekho lula, kuba ayingabo bonke abantu abajolise kwicandelo loyilo lwegraphic, ngokulandelayo siza kuthetha amanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza itemplate ye-Excel yohlahlo-lwabiwo mali, ezinokuhlelwa ngokupheleleyo ngendlela yokuba ngokutshintsha idatha ethile kuphela, ungayisebenzisela naluphi na uhlobo lomsebenzi.
Kwakhona, yatsho itemplate Unomzekelo wohlahlo-lwabiwo mali Apho kubonelelwa khona ezona nkonzo ziphambili ziboniswayo, unokuzisebenzisa ukuqonda ngokuthe ngqo ukuba lingakanani ixabiso lomyili wemizobo, okanye uhlengahlengiso kuhlahlo-lwabiwo mali olwahlukileyo kwiinkonzo / kwiimveliso zakho.
1 Ngaba ubiza malini uMyili weMizobo kwaye yeyiphi indlela ekufuneka ubize ngayo ngeenkonzo zakho?
2 Iinqobo zokuvavanya kunye nemizekelo yebhajethi
2.1 Iimpawu zobungcali
2.2 Imbali yomsebenzi kunye namava
2.3 Ukufumaneka kunye namaxesha okuhambisa
2.4 Iindlela zokuhlawula kunye nezixhobo zokuhlawula
Ngaba ubiza malini uMyili weMizobo kwaye yeyiphi indlela ekufuneka ubize ngayo ngeenkonzo zakho?
Ngokubanzi, xa kubalwa uhlahlo-lwabiwo mali luyadinisa, ihlala inesizathu esinye kwezi zilandelayo:
Awuzazi iimfuno zomthengi.
Ukunqongophala kwamava kwicandelo.
Ukhuphiswano olukhulu lweendleko ngaphakathi kwintengiso.
Ikhethekileyo kwaye / okanye inoveli yeNkonzo / iMveliso.
Xa uthetha bangakanani abaYilo beMizobo ngesiqhelo abahlawulisayo, Abaprogram bewebhu kunye nayiphi na enye ingcali ezinikele ekunikezeleni ngeenkonzo ezibandakanya ubuchule kunye neempawu zobugcisa okanye ezo zinobuchwephesha, ukunika umthengi iskimu sohlahlo-lwabiwo mali kwezinye iimeko kunokuba nzima.
Iinqobo zokuvavanya kunye nemizekelo yebhajethi
Nokuba ubuchwephesha bujolise kumsebenzi othile okanye ukuba ujolise kwizifundo zoqeqesho lokufundisa, indleko zazo zonke iintlobo zomsebenzi iyahluka ngokweenguqulelo ezininzi. Nangona kunjalo, kungcono ukuba uthathele ingqalelo abo siza kukuxelela ngezantsi:
Ngelixa kuyinyani ukuba zininzi iimpawu ezithi kunokwenzeka ukuba ufunde kwaye uphuhle njengoko ixesha lihamba, inyani kukuba kukwakho neemeko ezithile apho kufuneka ukwazi ukulinganisa, ukubakhona kwelinye okanye kwelinye icandelo. Njengoko kusenzeka kwicandelo loyilo loMzobo, apho ezinye zeempawu eziyimfuneko zihlala:
Uyilo: Kubalulekile ukuba ube nakho ukuziqhelanisa ngokugqibeleleyo notshintsho rhoqo kwicandelo.
Uvelwano: Kuyafuneka ukutolika ukuba zithini na iimfuno kunye neemfuno zomthengi ngamnye.
UkungafaniIyafuneka ukuze ikwazi ukuqonda iifilosofi ezahlukeneyo malunga neshishini.
Ukuba nezi mpawu kuwo nawuphi na umsebenzi, kujika nje kubalulekile ukunika ixabiso elikhulu emsebenzini wakho.
Imbali yomsebenzi kunye namava
Kuyimfuneko ukuba uthathe ingqalelo kumava onawo kulo msebenzi ubandakanyekileyo, kuba uvela kuwo unokubonelela ngeziphumo ezifanelekileyo, ukongeza ekubeni nako ukubandakanya iindleko eziphezulu kwitemplate yakho yohlahlo-lwabiwo mali loMzobo.
Umzekelo, umyili onamava angaphantsi kweminyaka emithathu kwicandelo, usazakuthathelwa ingqalelo ngokungathi ebekwi "ukwakha iphothifoliyo yakho", Okubangela ukuba imisebenzi emininzi abayenzileyo inexabiso eliphantsi, kuba ngeli nqanaba eyona nto ibalulekileyo yile fumana izingqinisiso ezifanelekileyo.
Ukufumaneka kunye namaxesha okuhambisa
Ukuba ngenxa yamava akho unayo ukubonelela ngeziphumo ezifanelekileyo ngexesha elifutshane Okanye ukuba ufuna ukubeka phambili abathengi abathile ushiya eminye imisebenzi ngasemva, kuya kufuneka uyazi ukuba le yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo xa usenza kwaye ungenisa ulwandlalo lohlahlo-lwabiwo mali.
Iindlela zokuhlawula kunye nezixhobo zokuhlawula
Ngokwesiqhelo, nini sebenza ukude okanye kwi-intanethi, Abayili bayathanda ukubuza ubuncinci ama-50% endleko yokugqibela kwangaphambili kwaye ukuba ngokwexesha kunye nethemba onalo kumthengi othile, ezi zihlala zi iimeko zohlahlo lwabiwo-mali kwaye intlawulo iza kugqitywa, njengokuleqa abathengi emva koko ukufaka ii-invoice akumnandi.
Siyathemba ukuba sikwazi ukukunceda kulo mbandela ilula kwaye inzima kanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Itemplate yoyilo loyilo loMzobo
Izibonelelo kunye neendlela zokufaka umbala kuhlobo lwakho lomntu